अकबरे खुर्सानी बेचेर दुई लाख आम्दानी – Medianp
आइतबार, ०५, फागुन, २०७५
अकबरे खुर्सानी बेचेर दुई लाख आम्दानी
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: शुक्रबार, मङि्सर २१, २०७५१३:४९0
कुश्मा, २१ मङ्सिर । रोजगारी अवसरको खोजीमा युवाहरू विदेश जानेक्रम बढिरहेका बेला पर्वतका एक युवाले अकबरे खुर्सानी बेचेरै राम्रो कमाइ गरेका छन् । जिल्लाको महाशिला गाउँपालिका वडा नं ५ लुङ्खुका प्रकाश क्षेत्रीले व्यावसायिकरूपमा अकबरे खुर्सानी खेती गर्दै गाउँमै बसेर राम्रो आम्दानी गरिरहनुभएको हो ।
आठ रोपनी जमीनमा खुर्सानी लगाउनुभएका क्षेत्रीले एकपटकको उत्पादनबाट मात्र रु दुई लाख कमाउन सफल हुनुभएको छ । उहाँले अहिलेसम्म १२ क्विन्टल खुर्सानी उत्पादन भएको र अब यही वर्षमै सोही परिमाणकै खुर्सानी फल्ने बताउनुभयो । परीक्षणकै क्रममै राम्रो उत्पादन दिएका कारण खुर्सानी खेतीलाई अझै बिस्तार गर्ने उहाँको योजना छ ।
गाउँपालिकाका अधिकांश वडामा विगतमा तरकारी बाहिरबाट आउने गरेको थियो । पछिल्लो समयमा गाउँपालिकाको सक्रियता र स्थानीयवासीले पनि घरमै तरकारी उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने सोचले बाहिरबाट तरकारी आयान हुनेक्रम घट्दै गएको छ ।
खुर्सानीसमेत ठूलो परिमाणमा महाशिलामा भित्रिँदै आएकामा क्षेत्रीले त्यसलाई रोकेरै छाड्ने दाबी गर्नुभएको छ । अहिले अकबरे खुर्सानी मात्र लगाउनुभएका प्रकाशले यही वर्षबाट रागे खुर्सानीको उत्पादन पनि शुरु गर्ने बताउनुभयो । यसका लागि उहाँले भारतको सिलोङ पुगेर रागे खुर्सानीको बीउसमेत ल्याइसक्नुभएको छ ।
युवा कृषक क्षेत्रीको आम्दानी देखेर वडामा अन्य युवासमेत तरकारी खेतीप्रति आकर्षित हुनेक्रम बढेको महाशिला– ५ का वडाध्यक्ष जीवन उच्चै ठकुरीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भन्ने अभियान शुरु गरेको गाउँपालिकाले अबको केही वर्षमा निर्यातको बाटो तय गर्दैछ । यो खुशीको कुरा हो ।”
तपाईँलाई थाहा नभएका महिलाबारे १९ रोचक तथ्य
अब केहि घण्टा भित्र मिस वर्ल्ड घोषित हुने ! मिस वोर्ल्डको ताज लगाउछिन् त शृंखलाले?
जापान जाने ‘नेपाली कामदार नठगिने उपाय’ खोज्दै सरकार
समाजसेवामा नथाक्ने दम्पती : झन्डै ३२ लाख खर्चेर शिव मन्दिरको गजूर उचाले
मन्त्रीहरु हेरफेरको तयारी, कुन कुन मन्त्रीको पद धरापमा ?
महोत्तरीका अवैध क्रसर बन्द गरिँदै
इज्जतसँग बाँच्न चाहन्छन् बादी समुदाय
घरेलु मैदानमै जिरोनासँग रियल स्तब्ध
कञ्चनपुर बेलौरी नगरपालिका कार्यालयका सब–इञ्जिनीयर हृदयराज बजगाईं ६० हजार घुस सहित पक्राउ
कपाल स्वस्थ, बलियो, बाक्लो र लामो बनाउन प्रयोग गर्नुहोस् यी ४ भिटामिन !
विश्वको उत्कृष्ट शहरमध्ये काठमाडौँ पनि पर्न सफल
यी हुन् उच्च रक्तचाप हुने ४ कारण !
१६ रुपैयाँमै साडी ! किन्नेको भीडलाई सम्हाल्न प्रहरीलाई हम्मेहम्मे
४० वर्षपछि पनि यसरी बन्न सकिन्छ फिट र बलियो !
बाग्लुङदेखि काठमाडौँसम्म भिआइपी बस सेवा सुरु